Announcement | DCT
DCT Delivery Management Platform
“DCT Delivery Service စစ်တွေမြို့နှင့် တောင်ကြီးမြို့များသို့ ရောက်ရှိလာပါပြီ….”
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များမှ တဆင့် စစ်တွေနှင့်တောင်ကြီးမြို့များသို့ အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်လိုသော Online Shopping များအတွက် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ရုံးခွဲ အသစ်များကို စစ်တွေနှင့်တောင်ကြီးမြို့များတွင် ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ………
DCT Delivery Service မှ Online Shopping များ အပ်နှံသော ကုန်ပစ္စည်းများကို Customer များထံ အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်း၊ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ စစ်တွေနှင့် တောင်ကြီးမြို့များသို့ အိမ်တိုင်ရာရောက် အချိုသာဆုံးပစ္စည်းပို့ဆောင်ခများဖြစ်သည့် ၄၀၀၀ ကျပ် (စစ်တွေမြို့) နှင့် ၃၀၀၀ ကျပ် (တောင်ကြီးမြို့) ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် DCT Delivery Service ကို အသုံးပြုသော E-Commerce များ၊ Online Shopping များ အနေဖြင့် DCT Delivery Management Platform ကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ မိမိဆီမှ ၀ယ်ယူသော Online Buyer များအနေဖြင့်လည်း www.dctmyanmar.com မှတဆင့် မိမိဝယ်ယူထားသော ပါဆယ်ထုပ်ကို အလွယ်တကူ Tracking လိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ DCT Delivery Service ကို ယုံကြည်စွာ လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့သော မိတ်ဟောင်း ၊ မိတ်သစ် Online Shopping များအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ခင်ဗျာ :-D...
“Customer’s Dreams, Our Value”
DCT (Sittwe) Office Address - တော်ဝင်လမ်းဆုံ၊ လမ်းမကြီး၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့။
DCT (Taung Gyi) Office Address - ခြံအမှတ်(၁၂၈/၃၁)၊ ရပ်ကွက် (၄)၊ ထုံးဘို၊ အေးသာယာမြို့။
DCT Head Office (Yangon) Contact – 0996927721 ၊ 0996927723 ၊ 09783644123 ။
DCT Delivery Service
Sep 1 ရက်နေ့မှစပြီး DCT Delivery Service မှ ပို့ဆောင်ခနှုန်းထား ၂၀၀၀ ကျပ် ( #2000ks) ထဲနှင့် ရန်ကုန်မြို့ မည်သည့်မြို့နယ်ကိုမဆို အိမ်တိုင်ရာရောက်စနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးတော့မည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးကောင်းမွန်သော service ပေးနိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ၃ ခုမြောက်သောရုံးခွဲအသစ်ဖွင့်လှစ်ပြီးဝန်ထမ်းအင်အားများလည်းထပ်တိုးထားပါတယ်ခင်ဗျ ။ DCT စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှ ယနေ့တိုင် ၁ နှစ်တာအတွင်း ယုံကြည်စွာလက်တွဲလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ လုပ်ငန်းများအားလုံးကို အစဉ်အမြဲကျေးဇူးတင်လျက်ပါခင်ဗျာ
အသက်သာဆုံးနှုန်းထား နှင့် အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ဖို့ DCT Delivery Service ကို ယခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါခင်ဗျ
☎️ For Delivery: 099 699 277 19 / 097 836 441 23
☎️ Customer Service Team : 099 699 277 20 / 099 699 277 23
Sep9ရက်နေ့ မှာပြုလုပ်မယ့် Invasion festival အတွက် လတ်မှတ်များ ပို့ဆောင်ပေးရန် DCT မှ official delivery partner အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါတယ်ခင်ဗျာ ! DCT service ကို ယုံကြည်စွာရွေးချယ်ပေးတဲ့အတွက် Invasion Festival ကြီးကျေးဇူးပါ
We are Invasion Festival's Official Delivery Service Partner ! Thank you Invasion Festival for trusting & supporting our Delivery Service.
DCT Delivery Service မှလူကြီးမင်းတို့၏ ပြည်တွင်းမှစာနှင့်ပစ္စည်းထုပ်များကိုပို့ဆောင်ရာတွင် မြန်ဆန်တိကျစွာဖြင့် ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အိမ်တိုင်ရာရောက် (Door to Door) စနစ်ဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
သွက်လက်ရည်မွန်သော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀န်ထမ်းများဖြင့် အကောင်းဆုံးနှင့်အဆင်ပြေဆုံးသော ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းလျက်ရှိပါသည်။
DCT Delivery Service မှ အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
-Online Shopping (E-commerce) မှဝယ်ယူသော ပစ္စည်းများကို လာယူပို့ဆောင်ပေးခြင်းများ။
-အကြောင်းကြောင်းစာများ၊ဖိတ်စာများ အစရှိသောစာစောင်အရေအတွက်များကို ရန်ကုန်မြို့တွင်းလိပ်စာများသို့ပေးပို့လိုပါက အထူးနှုန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
-ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေသော Online Shopping များအတွက် Cash Upon Collection ငွေကြိုခြင်းပေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
တိုက်အမှတ် (၇၁)၊ ပထမထပ်၊၀ါးတန်းလမ်း (အောက်ဘလောက်)၊လမ်းမတော်။
ဖုန်း - 09783644123၊ 09783688123
Our Quote, Our Passion
လူကြီးမင်းတို့၏ Customers များအတွက် ပစ္စည်းပို့ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ တမူထူးခြားသောဝန်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံများကို ရရှိစေရန် DCT Home Delivery Service ဆီ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ…။
Hot Line Number : 09-783644123 / 09-783688123